Jack Ma (ဘီလျံနာဖြစ်အောင်) ဘယ်လိုကြိုးစားသွားလဲ… ? -
Zero to Hero (သုညဘ၀) မှနေ (ဘီလျံနာ) ကမ္ဘာကျော်ဖြစ်အောင် စွန့်ဦးတီထွင် ကြိုးစားခဲ့တဲ့ Jack Ma ရဲ့ ၀င်ငွေရှာနည်း၊ ဈေးကွက်မဟာဗျူဟာဖော်ဆောင်နည်း၊ လုပ်ငန်းတိုးချဲ့နည်းတွေကို ပြန်လည်သုသေသနပြုလျှက်
ကမ္ဘာ့နံပါတ် (၁) Tony Robbin ရဲ့ သင်တန်း (စင်္ကာပူ) မှာ သွားရောက်လေ့လာစဉ်က Business Mastery ဆိုတဲ့ (စီးပွားရေး တဖက်ကမ်းကျွမ်းကျင်မှု) ဆိုတဲ့ နည်းလမ်း (၃-ချက်) နဲ့အတူ စီိးပွားရေးခေါင်းဆောင်နေသူအားလုံးအတွက် အကြံပေးထားပါတယ်။
Jack Ma (Alibaba) လုပ်ငန်း ၀င်ငွေတိုးချဲ့နည်းများ
(ပထမဆင့်) Partner မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများနဲ့ လုပ်ငန်းကို ပေါင်းစပ်ပြီး စတင်ခဲ့ပါတယ်။
(ဒုတိယအဆင့်) Share Holder ရင်းနှီးမြုပ်နှံနိုင်သော ရှယ်ယာရှင်များကို ဖိတ်ခေါ်တိုးချဲ့ခဲ့ပါတယ်။
(တတိယအဆင့်) Investor နိုင်ငံခြား Valuation လုပ်ငန်းတန်ဖိုးမြင့်တင်ပြီး လုပ်ငန်းကြီးထူထောင်ခဲ့ပါတယ်။
(စတုတ္တုအဆင့်) IPO – Public စတော့ရှယ်ယာတင်ပြီး ဘီလျံနာ လုပ်ငန်းစုဖြစ်တဲ့အထိ အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။
Jack Ma (Alibaba) လုပ်ငန်း ဈေးကွက်ဖော်ဆောင်မှုမဟာဗျူဟာ
Branding Strategy – Alibaba ဆိုတဲ့ (Brand) တခုကို အောင်မြင်စွာ ဦးစွာ တည်ဆောက်ခဲ့တယ်။
Product Strategy – Alibaba.com (B2B) Taobao.com(C2C), Alipay.com, Aliexpress စတဲ့ ထုတ်ကုန်ဆက်နွယ်မှုတိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ပြီး ကမ္ဘာ့အနှံ့ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။
Corporate Strategy – တရုပ်နိုင်ငံမှာ YAHOO အောင်မြင်နေချိန် – Yahoo နှင့် ပေါင်းစပ်ခဲ့ပြီး China Yahoo (Internet Portal) ကို ဈေးကွက်ခိုင်မာစွာပေါင်းစည်နိုင်ခဲ့တယ်။
Business Strategy – ကြီးမားတဲ့ လုပ်ငန်းစုကြီးဖြစ်ဖို့ Founder + Partner + Shareholder + Client + Member များစွာဖြင့် ဖွဲ့စည်းထူထောင်ခဲ့ပါတယ်။
Jack Ma (ဘီလျံနာ) ဖြစ်တဲ့ အချက်တွေကို လေ့လာကြည့်ရင် (စီးပွားရေးမှာ မဟာဗျူဟာ) အားသာချက်ပင်ဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့ခေတ် နိုင်ငံတကာ လုပ်ငန်းစုတွေရဲ့ စီးပွားရေး မဟာဗျူဟာတွေဟာ အတုယူစရာဖြစ်ပါတယ်။ Jack Ma ရဲ့ စီးပွားရေးမဟာဗျူဟာမှ မြန်မာနိုင်ငံစွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းများအတွက် အနာဂတ်မဟာဗျူဟာတွေ ရရှိနိုင်မှာပါ။
(အောင်မြင်ချင်ရင် – သင်လိုချင်တဲ့ အောင်မြင်နေတဲ့ သူတဦးကို ရှာဖွေပါ၊ သူ့ရဲ့ပုံစံအတိုင်း ကြိုးစားကြည့်ရင် သင်လည်းတနေ့အောင်မြင်လာမှာပါ) ဆိုတဲ့…
ကမ္ဘာ့နံပါတ် (၁) ဂုရုကြီး – Tony Robbin ရဲ့ အကြံပေးချက်ဟာ သိပ်ကို မှန်ကန်ပါတယ်။
ကျွန်တော် အောင်မြင်နေတဲ့ လုပ်ငန်းစုတွေရဲ့ မဟာဗျူဟာအတိုင်း ပုံစံယူ ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ မိတ်ဆွေ မီလျံနာလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ MESI ဆရာသမားရဲ့ အကြံညာဏ်အတိုင်း အမြဲဆန်းသစ်ပုံဖော်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အောင်မြင်လာတဲ့အခါ – တခြားသော မိတ်ဆွေလုပ်ငန်းရှင်များ၊ စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းများအတွက် ပြန်လည်မျှဝေ အကြံပေးမှုတွေကို (၂၀၁၈) မှာ ပြန်လည်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
(Telenor ကိုယ်စားလှယ်တွေ၊ Shopping Mall တွေ၊ ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းကြီး) တွေမှာ အကြံပေးခဲ့စဉ်က (နိုင်ငံခြားနဲ့ JV စာချုပ်တွေ၊ MOU ပုံစံတွေ၊ Share Contract တွေ၊ Company SOP နည်းစနစ်တွေ) နဲ့ နိုင်ငံခြားမှ လေ့လာထားတဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေဟာ (လုပ်ငန်းရှင်တွေ အားလုံးအတွက်) မီလျံနာ – ဘီလျံနာ (Group ကုမ္ပဏီကြီးတွေအထိ) ဖော်ဆောင်သွားနိုင်ဖို့ မိတ်ဆွေလုပ်ငန်းရှင်များနဲ့အတူ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးအကြံပေးသွားချင်ပါတယ်။ တခုခုလိုအပ်ရင်တော့ MESI ကို ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။
ကမ္ဘာ့နံပါတ် (၁) Tony Robbin ရဲ့ သင်တန်း (စင်္ကာပူ) မှာ သွားရောက်လေ့လာစဉ်က Business Mastery ဆိုတဲ့ (စီးပွားရေး တဖက်ကမ်းကျွမ်းကျင်မှု) ဆိုတဲ့ နည်းလမ်း (၃-ချက်) ကို လေ့လာခဲ့ရပါတယ်။
Business Mastery အချက် (၃-ချက်)
(၁) Model Someone who’s already achievement (အောင်မြင်ခဲ့သူများ၏ ပုံစံများကို လေ့လာအတုယူပါ)
(၂) Immersion (100 % Mindfulness) စိတ်နှစ်ကိုယ်နှစ်နဲ့ ကြိုးစားဆောင်ရွက်ပါ။
(၃) Spaced Repetition အောင်မြင်သူတွေနဲ့ မကြာခဏဆိုသလို တွေ့ဆုံအတိုင်ပင်ခံပါ။
ဒီအချက် (၃-ချက်) ဟာ သိပ်ကို မှန်ကန်ပါတယ်။ ကျွန်တော် MESI လုပ်ငန်းစု မြို့ပေါင်း (၂၀-အထိ) သင်တန်းများဖွင့်လှစ်ရင်း ၊ Franchise ကျောင်းခွဲတွေ၊ သင်တန်းသားပေါင်း (၁၀၀၀၀) ကျော်အထိ အောင်မြင်ခဲ့မှုနဲ့ MESI ဒီလိုအခြေအနေဖြစ်လာတာဟာ (Business Mastery) (၃-ချက်) ကြောင့်သာ ဖြစ်ပါတယ်။
စင်္ကာပူမှာ Tony Robbin သင်တန်း တက်ခွင့်ရခဲ့တဲ့အတွက်… ကျွန်တော့်ရဲ့ Role Model တွေဖြစ်တဲ့… Jack Ma နဲ့ Tony Robbin တို့လည်း ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။
တောထဲသွားဖို့ဆိုရင် – တော၊ တောင် အကြောင်းကို ဦးစွာလေ့လာရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။
စီးပွားရေးလောကထဲသွားဖို့ဆိုရင် – စီးပွားရေးမဟာဗျူဟာတွေကို ဦးစာလေ့လာဖို့ အားပေးရင်း။
Business Mastery (စီးပွားရေးမှာ တဖက်ကမ်းကျွမ်းကျင်သူဖြစ်နိုင်ပါစေ)
Zin Phyo Paing (MESI)
ဘာကြောင့် မအောင်မြင်ရမှာလဲ… ? ? Why don't you succeed yet??